အပူလွှဲပြောင်းစက္ကူ | ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း OEM ODM-heattransferpaperb2b.com
လိပ်စာ: 1F., No.42-8, Xikun 1st St., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan
တဲလ်: +886-2-26818851 ext.23
လိပ်စာ:5F, NO.11 plant，Huliyuan, Tongan industrial concentration district, Xiamen city, Fujian province, China
လိပ်စာ: Desa Playangan, Dusun3RT 03, RW 01
လိပ်စာ: No E9/193G, Hamlet 6, Tan Nhut Village, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
တဲလ်: 028.2229 0088
Hauming Import & Export CO., LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် အပူလွှဲပြောင်းစက္ကူ, အပူလွှဲပြောင်း Label, အပူလွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Vietnam. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အမည်ပြော: Elastic အထည်အလိပ်တိပ်
ပုံစံ: release paper
အမည်ပြော: နှစ်ချက် Side အထည်အလိပ်တိပ်
အမည်ပြော: reflective အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
အမည်ပြော: အပူယဉ် Pad
အဆိုပါ အပူလွှဲပြောင်းစက္ကူ ရောင်းချသူ '' ဥပစာမှာသာလွန်တန်းအမျှင်နှင့်ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအဆိုပါစာတမ်းများထူးချွန်မျက်ရည်ခွန်အားကိုမြင့်မား opacity ကို, လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုနှင့်ဂေဟစနစ်-friendly ကဲ့သို့မိမိတို့ features တွေကိုအဘို့အတန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားဖွယ် clients များမှအမြိုးမြိုးအရွယ်အစား, ပုံစံမျိုးနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဤစာတမ်းများပူဇော်လော့။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ချောရလဒ်များကိုရှိသည်နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးအကောင်းဆုံးဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာရရှိနိုင်ပါသည်။ client-ဗဟိုပြုသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်း, ငါတို့သည်သူတို့၏မှီစုစုပေါင်းရောင့်ရဲဖို့ဘက်စုံချဉ်းကပ်အောက်ပါယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကောင်းကောင်းသတ်မှတ်ပါတယ်အရည်အသွေးသည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ versed နှင့်ထိရောက်သောနည်းပညာကိုတဆင့်အညီ အပူလွှဲပြောင်းစက္ကူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသောလုံ့လဝိရိယပညာရှင်များကထောက်ခံကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းချသူကျွန်တော်တို့ထိရောက်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်လွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းအသံနှင့်လက်နက်ကိရိယာများကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု. ပို. ထိရောက်မှုထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်, ငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့မှီနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားအတွေ့အကြုံနှင့်ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်ဦးတည်နေကြတယ်ချီးမွမ်းထိုက်သောအသိပညာရှိနေသော်ငြားလည်း။